Ziziphi ii-SEO zokugqibela?
Namhlanje, i-Google ibonisa iziphumo zophando, ezikude kunye nemveli yemveli (ndiyathetha nje imicandelo ye-organic site) esayibonile iminyaka emibini ngaphambi. Iilgorithm zokukhangela zeGoogle, kwakunye neendlela eziphambili ze-SEO, qhubeka uguqukela. Ngoku iinjini zokukhangela zibeka ngaphezu kwezinto ozicelayo - njengoko i-SERP ku-Google, kunye ne-Yahoo kunye ne-Bing ihlasele ngoku imifanekiso ehambelana nayo, iividiyo, imidiya yoluntu, kunye neebalaphu zendawo. Ngoko ke, ukuba uthengisa kwizithuthi kunye nokuthengiswa njengomnini-shishini lomsebenzi, qiniseka ukuba ukhangele ezinye zeyona ndlela ibaluleke kakhulu ye-SEO namhlanje - umzug preise.Ngaba iwebhusayithi yakho idinga ukubonakala kwe-intanethi ngokubhekiselele kunye nokuchofoza ngaphezulu? Emva koko makhe siqwalasele izinto ezimbalwa zezona ndlela zanamhlanje zendlela yokuSebenza kweeNjini zoKhenketho:
I-SEO yengingqi yindawo engundoqo kuyo ukuba ishishini lakho libheja kwindawo uludwe kunye nokugxila ekufumaneni uphawu ngokuthobela iGoogle Maps, umzekelo. Ngokwezinga eliphezulu ze-SEO ekuhlaleni kwendawo, ndincoma ukuba:
Iingcaphuno. Hlola isicatshulwa kabini ukuba ube nolwazi oluchanekileyo malunga nebhizinisi lakho kufakwe kwiintlobo ezininzi ezidumileyo kwi-Intanethi kunokwenzeka. Vele uqale ngohlu lweGoogle ngokwalo. Ingongoma ephambili apha kukungqinelana kwakho, ndiyathetha ukuba zonke izihlomelo zakho kufuneka zizinye, e. g. , ukuba unqume ukusebenzisa into efana ne "Str. "Ngokuchazwa okufutshane kwe" Iitrato "kwiphepha lakho leGoogle Places, qwa lasela lonke uluhlu ukubonisa ngokufanayo.
iindawo zeGoogle. Ukugcina i-SEO kwiwebhusayithi yakho, unokukwazi ukwenza okufanayo kwi-Google Places page. Ngaba ulungele kakuhle ngokubandakanya iindidi ezihambelanayo. Kwakhona, ukuba kuyimfuneko, qiniseka ukuseka uxhulumaniso olufanelekileyo phakathi kwephepha lakho kunye nekhasi elithile elikulo lomhlaba lokumisa.
Ubukho obuphezulu kwi-intanethi. Ngokuqhelekileyo, kukho kuphela ukubuyekezwa kweGoogle kuluhlu lwayo lwe-SERP. Ngoko, unako ukwakha ubungqina bekhompyutheni enamandla ngakumbi kwi-shishini lakho ngokufumana iimpendulo ezingaphezulu kwezinye iindawo ezifana ne-Superpages, u-Trip Advisor, Yelp, njalo njalo.
Into elandelayo kukuhambelana ngokuthe ngqo kumgangatho we-SEO wanamhlanje usebenza kwintsimi yezoLuntu. Masijongane nayo - loo maxesha xa ukukhangela ngokwalo kunye neendlela zoluntu lwezentlalo ziza ngokwahlukileyo zidlulileyo kudala. Namhlanje, yonke indawo ye-intanethi ye-intanethi ixhomekeke kakhulu kwiimpawu zentlalo ezahlukileyo, ezifana nokuthanda kwi-Facebook, izabelo kwi-Twitter, njl. Ukongezelela, ngoku iziphumo zokukhangela ziye zaba zizodwa ngabantu bonke. Yingakho usebenza kwiNtengiso yezoLuntu kuLWENZIWE.
Emva kwakho konke, ukwenza ukulungelelanisa amagama akho okhiye kunye namagama angundoqo, zama ukucinga okungakumbi ngabantu abaphilileyo, kunokuba abasebenzisi bokukhangela. Khumbula, uphando olungundoqo lwegama eliphambili luye lube ngumqolo we-SEO jikelele. Ngokubhekiselele kumbono wamanje, nangona kunjalo, isiqulatho sakho sewebhu kunye namagama angundoqo kufuneka siphendule ngakumbi kubasebenzisi benene kunanini ngaphambili. Yingakho kufuneka uyeke ukucinga ngamagama aphambili nje ngeenkcukacha zobugcisa. Ukwenza uphando olunzima, qhubeka ukhumbula iingcinga zabantu abaphilileyo abaya kusebenzisa amagama abo abalulekileyo malunga nezicelo zabo zokukhangela rhoqo.